version 0.6.5 – အခုတော့နည်းပါး bug တွေကြောင့် features
အောက်တိုဘာလ 26, 2010 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 8 comments
bugs - တချိန်လုံးသူတို့ကိုမချစ်
version 0.6.5 အချို့သော bug တွေကြောင့် squashing အပေါ်အာရုံစူးစိုက်လာခဲ့သည် (လွန်းအနည်းငယ်ဆုတ်ယုတ်). ဒါဟာဝေးအားဖြင့်ငါတို့သည်ယနေ့ဖြန့်ချိခဲ့ကြသောအတည်ငြိမ်ဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအစမှထောက်ခံမှုကထပ်ပြောသည် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တချို့ header ကိုမှော်အတတ်.
anphicle အားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြပုံသေလိုဗေးနီးအလံ bug ကို (ထိုသို့မတိုင်ခင်လီယွန်ခဲ့သည်, စူးရှသောမျက်စိအတွက်ကျေးဇူးတင်စကား!).
က Marco အားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြအဖြစ် wordpress ကို Canonical redirects နှင့် URL ပြန်ရေးတာမျိုးကိုင်တွယ်အသုံးပြုနိုင်လမ်းကိုအတူ Fixed ပြဿနာတစ်ရပ်, wordpress ကိုကျွန်တော် tag ကိုနှင့်အမျိုးအစား prefixed urls ဘာသာပြန်ထားသောထို့ကြောင့် default ဘာသာစကား url သူတို့ကို redirected လမ်းကိုအဘယ်သူမျှမအသိပညာခဲ့. ဒီပြင်ဆင်ချက်လည်းအချို့ URL တစ်ခု Canonical ပုံစံတိုးတက်လာ.
အားလုံးဘာသာပြန်ရန်နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်၎င်းတို့၏စွမ်းရည်ကိုနှောင့်နှေးသောပို့စ်ဘာသာပြန်ချက်ပြီးနောက်အတူ Fixed တစ်ဦး bug ကို – (ကျေးဇူးတင်စကား nightsurfer [လက်မှတ် #122]) – ငါတို့သည်လည်းတစ်ဦး meta အစား redirect လုပ်ပေးခြင်းအသုံးပြု translate အပေါင်းတို့အားသတင်းအချက်အလက်များဖြတ်သန်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုတိုးတက်လာဖို့အချိန်ကို ယူ. ,.
buddypress စမ်းချောင်းပြဿနာများအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ JSON ဘာသာပြန်ချက် – (ကျေးဇူးတင်စကား Inocima [လက်မှတ် #121]).
ငါတို့သည်ယခုငါတို့ trac စနစ်ထဲမှာတစ်ဦး cleanup အပေါ်လုပ်ဆောင်နေကြပါသည်, အသစ်သမိုင်းမှတ်တိုင်များမှပွင့်လင်းလက်မှတ်တွေတာဝန်ပေးဖို့. အဖြစ်မြန်မြန်သင်တတ်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့ကိုအသစ်လက်မှတ်တွေဖန်တီးခြင်းကဒီကြိုးပမ်းမှုကူကယ်ရာမဲ့စေဖို့ကြိုးစားပါ.
ထိုသို့အစဉ်အမြဲ – ဒီဗားရှင်းကိုခံစားပျော်မွေ့.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: buddypress, bugfixes ပြင်ဆင်မှုများ, အလံ sprite များ, အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, ဒီနည်းကို
version 0.5.3 – URL များကိုဘာသာပြန်ဆိုနိုင်စွမ်း
ဇွန်လ 1, 2010 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 44 comments
ဒီဗားရှင်းသစ်ကိုထို site ပေါ်တွင် urls ပေးထားသောပစ်မှတ်ဘာသာစကားကိုပြန်ဆိုရန်ခွင့်ပြုသည်. ကျနော်တို့ကနေပညာရှင် Hans ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် Cosmedia (အလှကုန်ပစ္စည်းခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခြင်းနှင့်ဆေးကုသမှုနှင့် ပတ်သက်. website တစ်ခု) ဒီ feature အပေါ်ပြုလုပ်သောအလာကြပါသည်များအတွက်, အပြင်ထုံးစံ Permalink plugin ကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ patch ကိုလာကြပါသည်. သင်ကအင်္ဂါရပ်ပျောက်ဆုံးနေကြမယ်ဆိုရင်, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး site ကိုမှာသည်ငါတို့အဘို့လက်မှတ်ဖန်တီးရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ todo list ထဲမှာထည့်ရပါလိမ့်မယ်. သင်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီချင်တယ်ဆိုရင်, အင်္ဂါရပ်ဖွံ့ဖြိုးမှုလာကြပါသည်ကပိုမြန်ဖြစ်ပျက်စေကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်, နှင့်ရပ်ရွာပိုမိုပြည့်စုံထုတ်ကုန်ရ.
လည်းရှိပါသည်နောက်ထပ်တိုးတက်မှုများထိုကဲ့သို့သော default ကိုတစ်ခုထက်ကွဲပြားခြားနားဖြစ်ကြောင်းဘာသာစကားတွေမှာကိုဖန်ဆင်းသောထင်မြင်ချက်များကဲ့သို့သောအမှတ်အသားသရုပ်နှင့် default ဘာသာစကားမှာဘာသာပြန်ချက်များဖြစ်ကြသည့်အချက်ကိုအဖြစ်ထည့်သွင်း (သင်က setting တွင်ထို translate default ဘာသာစကား 'option ကိုအထိမ်းအမှတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်), wordpress ကိုစူပါ cache ကို plugin ကို သာ. ကောင်း၏ပံ့ပိုးမှု, နှင့် jQueryUI version တွင်သေးငယ်တဲ့အဆင့်မြှင့်က wordpress ကိုအကူအညီပေးအသုံးပြု 3.0 လာမယ့်အထောက်အပံ့.
ဒီအကြောင်းကြားစာကအတော်လေးကိုနောက်ဆုံးကို item ငါတို့သည်သင်တို့ကျွန်ုပ်တို့သည်တတိယပါတီ plugins တွေဟာသဟဇာတစာရင်းထိန်းသိမ်းရန်ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်စာမျက်နှာတစ်ခုရှိသည်ကိုသိလိုသောကြောင့် (ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများနှင့်အတူလိုအပ်မယ်ဆိုရင်). ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဤဝီကီတွင် အထောက်အပံ့ matrix ကိုစာမျက်နှာ plugin, ၎င်း၏တစ်ဦးဝီကီအဖြစ်,့site ပေါ်တွင်အသုံးပြုသူတစ်ဦးဖန်တီးနှင့်ဤတည်းဖြတ်တိုးတက်စေရန်အခမဲ့ခံစားရ.
အောက်တွင်တင်သွင်း: အထွေထွေမက်ဆေ့ခ်ျများ အတူ Tagged: လှူဒါန်းမှုများကို, အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, ဒီနည်းကို, trac, wordpress ကို 3.0, wp-super-cache ကို
ဘာသာပြန်ချက်သင့် site traffic အားမောင်းနှင်နိုင်
စက်တင်ဘာလ 19, 2009 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု4comments
ကျနော်တို့သတင်းအချက်အလက်ကိုခံရကြပြီ (တစ်ကောင်းတဲ့ပုံတစ်ပုံ) သူ Mike ဇန်နဝါရီလမှ iPhone ကိုပါရှိသော ဆိုက်.
transposh filter များကိုပြီးနောက် Bash.ch အသွားအလာခုန် install လုပ်ပါ
Transposh အခြားသူများကိုသင့်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုပိုပြီးလွယ်ကူလာစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်, အရာသဘာဝကျကျရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တို့ပါဝင်သည်. ဒီအလှည့်တွင်ပိုမိုသုံးစွဲသူများသင့်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာ get နဲ့သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေခွင့်ပြုထား (မူလကသူတို့ကနားမလည်နိုင်ဘာသာစကားတစ်ခုအတွက်ရေးသားခဲ့လျှင်တောင်မှ). ဤ site သည်စုံလင်သောဥပမာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်, မူလကဂျာမန်၌ရေးထားသမျှ, ၎င်း၏ကြီးမြတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်လာသည့်အခါ (ထို့ကြောင့်အများကြီးပိုရရှိနိုင်) its reach skyrocketed 😉
ကျနော်တို့အနေနဲ့ဒီ post မှမှတ်ချက်အပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပုံပြင်များမျှဝေဖို့အခြားသူတွေကိုကြိုဆိုပါတယ်, သင်အလားတူအောင်မြင်မှုကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီ? အလျှင်း? သင်ပျောက်ဆုံးနေဆဲသည်အဘယ်အရာခံစားရပါဘူး? ကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းနားကြားဖို့ပျော်ရွှင်ပါတယ်.
အောက်တွင်တင်သွင်း: အထွေထွေမက်ဆေ့ခ်ျများ အတူ Tagged: ဒီနည်းကို